software | ဇော်မျိုး
Folder တွေကိုစိတ်ကြိုက် အရောင်ပြောင်းမယ်……
ကျွန်တော်ဒီနေ. folder တွေကို ကိုယ.်စိတ်ကြိူက် အေ၇ာင်ပြောင်းလို. ၇တဲ. ဆော.၀ဲလ်လေးတစ်ခု တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဆော.၀ဲလ် သုံးနည်းလေးက မခက်ပါဘူး ကိုယ် အေ၇ာင်ပြောင်းချင်တဲ. folder လေးပေါ်မှာ Right Click>Colorize! နှိပ်လိုက်၇င် အရောင်ချက်ချင်း ပြောင်းသွားမှာပါ။
အေ၇ာင်လေးတွေနဲ.ဆိုတော. ၇ှာ၇တာ လွယ်ကူသွားတာပေါ.ဗျာ….
Credit : http://www.mymclub.net
Filed under software Tagged with software
Desktop Background မှာ Animation ပုံ ထားပြီး သုံးမယ်….
ကျွန်တော်တို. Desktop Background မှာ Animation ပုံလေးတွေ ထားပြီး သုံးကြည်.ဖို.အတွက်
ကိုသွားလိုက်ပါ။ http://www.desktopanimated.com ဆိုဒ်ေ၇ာက်၇င် ကိုယ်ကြိုက်တဲ. ပုံလေး နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီး၇င်
အပေါ်က ပုံလေးနှိပ်ပြီး ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
ဒေါင်းလို.၇လာတဲ. ဖိုင်လေး နှိပ်ပြီး Run လိုက်၇င် Desktop မှာ Animation ပုံလေးမြင်၇ပြီပေါ.ဗျာ။ ပြန်ထွက်ချင်၇င်တော. Desktop အောက်ညာဖက်ဘေးက
ဆော.၀ဲလ် Icon ကို Right Click > Exit ဆို၇င်၇ပါပြီ။
Filed under ဗဟုသုတ Tagged with software
WinRAR ကို ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ…
24/12/2011 Leaveacomment
ကျွန်တော် အခု WinRAR software အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေး တင်ပေး ချင်ပါတယ်။ WinRAR ဆော. ၀ဲလ်သုံးပြီး ကျွန်တော်တို.စီမှာ၇ှိတဲ. ဖိုင်တွေကို ချုံ.မယ် ၊ ပက်ဝက်ခံမယ် စတဲ. နည်းတွေကို စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို. ကျွန်တော် ဒီစာအုပ်လေး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ သိပြီးသားသူတွေအတွက်တော. ဘာမှ မခက်ပါဘူးဗျာ။
Filed under book Tagged with software
Screen Capture ဆော.၀ဲလ်
17/11/2011 Leaveacomment
ဆော.၀ဲလ်လေး တစ်ခု မျှဝေချင်ပါတယ် အခုကျွန်တော်တင်ပေးမဲ. ဆော.၀ဲလ်က ကွန်ပျုတာ ကနေ မိမိ ကြိုက်တဲ. အကြောင်းအ၇ာတွေ ကို photo အဖြစ်သိမ်းမလား ၊ video အဖြစ်သိမ်းမလား မိမိ ကြိုက်တဲ. ပုံစံနဲ. သိမ်းလို.၇ပါတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ. အကြောင်းအ၇ာကို fastsone capture software သုံးပြီး သိမ်းထားမယ်ဗျာ။ (key ဖိုင်လေးပါထည်.ထားပေးပါတယ်)
09/08/2011 Leaveacomment
ကျွန်တော်တို. စက်မှာ ၇ှိနေတဲ. မလိုတဲ. ဖိုင်တွေ recent ဖိုင်တွေ temp ဖိုင်တွေ ကို ၇ှင်းပေးတဲ.ဆော.၀ဲလ်ပါ ။ မလိုတဲ. ဖိုင်တွေ ၇ှင်းပေးတဲ. အတွက် ကွန်ပျူတာ ၇ဲ. စွမ်းဆောင်၇ည် ပိုမြင်တာပေါ.ဗျာ သုံးချင်၇င် အောက်က လင်.လေးနှိပ်ပြီး ဒေါင်းပေးပါ။ CCleaner ၇ှင်းပေးတဲ. နေ၇ာတွေကတော. …